Camelot Blue Beach ke Ihhotela 4 * (Turkey), ukubuyekezwa esizokhuluma sihlaziye lapha - leli bhishi ehhotela Youth uhlobo, esemgwaqweni resort endaweni Obagel (isigodi Tosmur) eningizimu Alanya. Luseduze ehhotela eziyinkimbinkimbi esikhulu "Diamond Hill". Lapha ngithanda ukuchitha baseYurophu - amaJalimane, izakhamuzi aseBaltic, i-British. Lena enye impikiswano esivuna ukuthi, ekhetha ihhotela, awazi overpay futhi ngeke ube nezinkinga. Yiqiniso, abalandeli ubukhazikhazi kanye esinjengesasebukhosini esikuyo oyodumazeka - esigabeni kwamakamelo amahhotela like "Blue Camelot" akudingi okunethezeka. Nokho, leli hhotela ibhekwa holidaymakers eziningi, yenza ufaneleke umzamo eyabelwe izinkanyezi ezine. izindawo ezinhle, ulwandle ehlanzekile ukudla okuhle ukuqinisekisa isimo esihle futhi omuhle.
Likuphi Camelot Ihhotela, iBlue Beach ke Ihhotela 4 * (Turkey)? Izibuyekezo usitshele ngakho ngempela endaweni ekahle. amakhilomitha amahlanu uwahlukanise kusukela maphakathi Alanya. Mayelana amahlanu - kusukela kohlangothi Manavgat. Antalya kude - cishe sasiyikhulu namashumi amakhilomitha amabili. Udlule zehhotela abaqeqeshi abalandela e Alanya. Ngo maphakathi izizinda idolobha kanye ibhasi - kuze kube yilapho omunye ezimpondweni. Ukuze uthole lapha Antalya isikhathi eside - amahora angaphezu kwamane. Beach - komgwaqo ehhotela. Budebuduze kwaleli chibi kukhona nezitolo ezinkulu "Migros" futhi "BIM", futhi ishibhile kuka izitolo enkabeni Alanya. Futhi indlela izivakashi ukuchaza Camelot ehhotela Blue Beach ke Ihhotela 4 * (Turkey)? Izibuyekezo lezivakashi ukukhuluma yokwakha eziyishumi storey nge ikheshi namakamelo amabili umhlangano. Itholakala engadini. Esikhathini indawo yokwamukela izivakashi isebenza. Insimu has a lot yokupaka, a izitolo ezimbalwa, i-swimming pool nge waterslide.
I eziyinkimbinkimbi "Blue Camelot Beach" - cishe amakamelo engamakhulu yezivakashi. Imikhakha amakamelo amahhotela yalolu hlobo ogwini Anatolia ikakhulukazi okufanayo. Lokhu double futhi kathathu ejwayelekile amakamelo, lapho kungenzeka ukuba afake umuntu ethe xaxa. Basuke elibheke olwandle, kukhona ubhavu noma eshaweni nge hairdryer, TV neziteshi isiRashiya, air-conditioning system. Umbhede nelineni washintsha kabili ngesonto futhi bahlanza nsuku zonke. Nikeza zokugeza - insipho, imoto. Amanzi ashisayo ekuseni kusihlwa - ngosuku nje efudumele. Amakamelo esasisanda kuyilungisa, zonke amapayipi amasha. Air conditioning iyatholakala ngaphandle kokuphazamiseka. Kukhona efrijini elincane kodwa sasivumela evulekile.
Ukudla ohlelweni "zonke okufakayo", njengoba umthetho, kufakwe ehhotela "Blue Camelot Beach". Sasekuseni uqale lapho kugamanxa ihora ekuseni nakusihlwa ukudla kuze nanye amathathu kusihlwa. Phakathi ukudla main ukunikela isidlo ibha isidlo. Yokudlela main ingenye, futhi lapho ungakwazi futhi zidla "a la Carte". brandy Local, iwayini, ubhiya nemimoya zifakwe. Inkantini abe pool, endaweni yokwamukela izivakashi kanye ogwini. Basebenza kuze nanye ebusuku. Ukuze sasekuseni sipho pancake, amaqanda ethosiwe, ngiyocasha amaqanda, kanye izinhlobo ezahlukene ayi, edumile yendawo ushizi, ushizi nemifino. Kwasemini kanye dinner - inkukhu, isibindi, inhlanzi. Ukukhethwa elimangalisayo salads isitshalo seqanda - ngaphezu kwakho konke ukubonga nokudumisa. Ngokuhlukile amadlingozi ukuma nososo. Ngokuvamile, eduze cuisine European, hhayi pereperchena. Amaswidi - Yummy. Izivakashi bathi ikhofi okumnandi kakhulu - kusuka emshinini Vending. itiye obuhle Izithako herbal, nemishayo ukwenza cocktail enhle. Utshwala Akazisoli lapho uvula ibhodlela. Phakathi kwasemini kanye dinner ngasechibini ukwenza Gozleme, okuyiwona ngisho ulayini.
Blue Camelot Beach Ihhotela 4 * (Alanya) kuyinto iqoqo nezinga lemisebenzi yezivakashi. Izinwele nobuhle salon, ilondolo, ukuvakasha edeskini, ikhono ukubiza udokotela uma ungazizwa kahle, ukushintsha imali - konke okungaphezulu, kukhona kule ehhotela. Abasebenzi hotel ukhuluma ngezilimi ezahlukene. Ungase futhi wasithatha wena nomndeni wakho nabangane kumemori ngosizo uchwepheshe ehhotela umthwebuli wezithombe. Ihhotela ukhonza lokubanjwa ezinhle "Wi-Fi". Ziningi ejwayelekile sokuzilibazisa ukuzijabulisa - amabhiliyade, imicibisholo, table tennis. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, ukudlala i-volleyball, futhi unikele surfing kanye neminye imisebenzi yezemidlalo phezu kwamanzi. Kukhona ngisho epaki amanzi amancane ejimini. Ezinganeni kukhona club nge abafundisi futhi ebaleni lokudlala. Animated show ezinhle futhi ngempela ezihlukahlukene. Zivame ihlelwe kusihlwa futhi emini izisebenzi usixoxela izivakashi ebhishi kanye pool. Nokho, ukuzijabulisa ehhotela ngokuvamile ngesiNgisi, futhi kufanele kubhekwe. Nakuba umbukiso umlilo futhi isisu ukudansa ukuhumusha kunoma ulimi akudingekile. A spa nge Hammam ozikhethela, Jacuzzi futhi ukubhucungwa. Ungakwazi ukuqasha ibhayisikili.
Phumula kolwandle kanye pool
Beach eduze ehhotela Blue Camelot Beach Ihhotela 4 * (Obagol) - siqu njengoba cishe lonke ugu ye Alanya, sandy, nge okuphothula itshana. Phambi kwakhe kufanele uhambe nge ukudlula ngaphansi. Ibhishi amathawula ikhishwa ngaphansi idiphozi zamadola ezinhlanu, nezambulela futhi sunbeds - ikhokhwe ngokusemthethweni. Nokho, izivakashi eziningi bhala ukuthi wasebenzisa kubo ufana nje. Futhi amathawula ezathathwa egumbini. Ulwandle muhle kakhulu, ahlanzekile, afudumele. zonke, leli chibi izesekeli Sun khulula. Uzenza echibini yokufakelwa esizeni likhulu kakhulu, nge endaweni - square metres, anamakhulu mahlanu. Kukhona slide, okuyisona usohlelweni. Sun Terrace uhlanzekile, khona njalo iyindawo.
Blue Camelot Beach Ihhotela 4 * Ihhotela (Turkey) - izivakashi Izibuyekezo
Izivakashi bakholelwa ukuthi lokhu kwenziwa ehhotela ehlonipheke kakhulu, ikakhulukazi intengo ukuthi ukhokhela izaphulelo. Ihhotela akukho frills, kodwa izinga ezinhle. indawo Excellent. abasebenzi friendly. 'Hwebani isikhathi esifushane futhi ngaphandle kwezinkinga. Amakamelo ezincane kodwa ahlanzekile. Insimu incane, kodwa nge echibini ezinhle futhi ngaphesheya komgwaqo - kolwandle. Ezokudla kuyinto ejwayelekile, zonke izinhlobo okukhona, ubhiya okuhle. Ngisho nabantu abanokholo eziningi iholidi baye phesheya, ikakhulukazi e-Europe, ziyaneliswa. Inombolo kanye nezindleko ukuvakasha liyalingana ezihlinzekayo - intengo iqala kusukela ama-ruble ayizigidi ezine ngekamelo ngosuku. Beach, travel, sihambahamba eduze Alanya ubudala futhi ajabule - ". Blue Camelot" zonke izimfanelo ezidingekayo lekuphumula ihhotela By endleleni, uma ufuna ukuhamba emhlabeni ezikhangayo ezungezile, izivakashi belulekwa ukuba ukuthenga umhlahlandlela hambo nganoma ngokuqinile "Ekovantur", budebuduze ihhotela. Njengoba ibhonasi, uthola kaShisha mahhala futhi emabhayisikili amahora amabili ngosuku. Imindeni nezingane lapha, futhi, efana, futhi batusa "Blue Camelot" kuze kube iholidi ngaphambi emkhayeni ongakhulumi kakhulu.
Ihhotela "Njengoba-El", Koktebel: izithombe kanye nokubuyekeza
Kuhle amahhotela Sudak (eCrimea): izithombe kanye nokubuyekeza
Amahhotela Popular Yelabuga
Kamelya Umhlaba Holiday Village 5 *: Ihhotela Izibuyekezo
Slotted ukhuni eqoshwe: izici, kukhethwa ukhuni, amacebiso awusizo
"Sinekod" (isiraphu): incazelo imfundo, ukusetshenziswa kanye nemiphumela engemihle
Indlela ukupheka indlu Steak?
UBrendan Rodgers: i-biography emfushane yomqeqeshi
Ukuhlaziya nekusebenta kokusebenza kanye nokusebenza yayo
Yini izinyoka afaneleka njengezilwane ezifuyiwe?
Kanjani inyanga egcwele ku indoda? Indlela yokwenza isifiso ngesikhathi Inyanga egcwele? Abantu engazalwa edilingene
Hockey umdlali uMarian Hossa: umsebenzi wezemidlalo, izimpumelelo, empilweni yakho